Newfoundland ခွေးကဘာလဲ? | Dogs World
မော်နီကာ Sanchez | | ခွေးမျိုးဆက်များ
Newfoundland ရဲ့ခွေးမျိုးရိုး ၎င်းသည်ကလေးငယ်များနှင့်လူကြီးများနှင့်ကောင်းမွန်စွာပေါင်းသင်းနိုင်သည့်အလွန်ချိုသောတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ လျင်မြန်စွာသင်ယူသောကြောင့်မည်သည့်မိသားစုနှင့်မဆိုအလွန်ပျော်စရာကောင်းမည်။
သဘောကောင်းသူ၊ လူသားများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုသူနှစ်သက်သည်။ Newfoundland ခွေးဆိုတာဘာလဲသိချင်လား လာမယ့်လာမယ့်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပြောပြပါ။ 🙂
1 Newfoundland ၏မူလအစနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
နယူးဖောင်လန်landခွေးသည်နယူးဖောင်လန် (Dominion of Newfoundland) (ယခုကနေဒါ၏အစိတ်အပိုင်း) ၏တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလေးချိန် ၆၀ မှ ၇၀ ကီလိုဂရမ်အကြားရှိပြီး ၇၂ မှ ၉၀ စင်တီမီတာအကြားရှိညှိုးနွမ်းနေသောညှိုးနွမ်းလျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်breရာမဖောက်သည့်ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ကြွက်သားနှင့်ကြံ့ခိုင်ပြီးခြေထောက်ကျယ်။ ခေါင်းကြီးကြီးနှင့်အညိုရောင်မျက်လုံးများရှိသည်။ နားတွေကလည်းဆွဲထားတယ်။
သူတို့၏သားမွေးသည်အလွှာနှစ်ထပ်၊ ရှည်၊ အနက်၊ အညိုရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖြစ်သည်။ သက်တမ်း ၁၄ နှစ်ရှိသည်.
Newfoundland ခွေးဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ furry ခွေးတစ်ကောင်ပါ။ သူကစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သဘာဝတရားမှာအေးဆေးတည်ငြိမ်တယ်။ အထူးသဖြင့်ကလေးများနှင့်အတူရှိစဉ်ကသူတို့ကိုနှိမ့်ချနိုင်သောကြောင့်ကြီးကြီးဖြစ်ခြင်းကိုအချိန်မရွေးကြီးကြပ်ရမည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တောင်တန်းတွေကိုလမ်းလျှောက်ရတာကိုနှစ်သက်ပြီးလမ်းလျှောက်ချင်တဲ့နေရာမှာလမ်းလျှောက်ရတာပျော်စရာကောင်းမှာပါ။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကို nanny dog ​​သို့မဟုတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကုမ္ပဏီကြီးအဖြစ်လူသိများသည်။ သင်အိမ်ပြန်ရောက်သည့် နေ့မှစ၍ သင်ပညာသင်ယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်သည်းခံခြင်း၊ ဒါ့အပြင် ဒါကြောင့်လူမှုရေးဖြစ်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ် အကယ်၍ မနက်ဖြန်တစ်ခုမွေးရန်စီစဉ်ထားပါကအခြားခွေးများ၊ လူများအပြင်ကြောင်များနှင့်လည်းပါ ၀ င်သည်။
ဒီ furry ကိုမင်းဘယ်လိုထင်လဲ နယူးဖောင်လန်သည်အလွန်လျင်မြန်စွာချစ်သောတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်ရှာဖွေနေသော may ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးမျိုးဆက်များ » Newfoundland ခွေးဆိုတာဘာလဲ